‘होचो हुँदाका फाइदा पनि’ - अचानक - नेपाल
‘होचो हुँदाका फाइदा पनि’
राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर निराजन खड्का, २९ काठमाडौँमा जन्मिए । धनुषामा हुर्किए, फुटबल उफार्दै । धनुषाबाटै अन्डर १२ टोलीमा छानिए । ५ वर्ष राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरै परे । अहिले पुन: मैदान छिरेका खड्काले आफ्नो पहिलो खेलमै साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा भुटानविरुद्ध १ गोल गरे भने पाकिस्तानविरुद्ध गोल गर्न सघाए । खड्कासँगको कुराकानी :
कम ब्याक गरेको पहिलो खेलमा गोल गर्नुभयो, अपेक्षा थियो ?
आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्छु भन्ने सोचेको पक्कै थियो । यस्तै नतिजाको अपेक्षा थियो ।
बीचमा कसरी राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर रहनुभयो ?
यसका थुप्रै कारण छन् । कसैकसैलाई मेरा जायज कुरा चित्त बुझेका थिएनन् । समय आएपछि जम्मै कुरा खुलस्त पार्छु ।
तर, यसले आफूलाई फाइदै भएको महसुस हुन्न ?
हो, राष्ट्रिय टोलीमा नअटाएपछि मैले आफ्नो ट्रेनिङ बढाएँ । दोब्बर–तेब्बर मिहिनेत गरेँ । परिणाम सबैसामु छ । यही बेला मूल्यवान पुरस्कार, उत्कृष्ट मिडफिल्डरको उपाधि पाएँ । थ्री स्टारका लागि ५ वटा ट्रफी जितेँ । यस घटनाले मेरो विश्वास उचाल्यो ।
२९ वर्ष पुग्नुभयो, कुन उमेरसम्म खेल्ने सोच छ ?
आफूलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अझै ५ वर्ष खेल्न सक्छु । म त आफ्नो खेललाई अहिले झन् धारिलो बनाउँदैछु ।
उमेरसँगै खेल शिल्पलाई कसरी धारिलो बनाउन सकिने रहेछ ?
निजी र व्यावसायिक जीवनलाई अनुशासनमा राख्न सक्नुपर्छ । खानपानमा ध्यान दिने र शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम राख्ने हो भने सकिन्छ ।
त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ ?
आर्थिक रुपमा चाहिँ गाह्रो छ । किनभने, हाम्रा खेलाडीको सेवा–सुविधा पुग्दो मात्रामा छैन । केही कुरामा त्याग गर्न सकियो भने असम्भव पनि होइन ।
नेपालको फुटबल नउक्सिनुको कारण खेलाडीको होचो बनाबट नै हो ?
एउटा कारण हो । तर, मुख्य होइन । नेतृत्व गर्ने संस्थासँग फुटबललाई अगाडि बढाउने ‘भिजन’ हुनुपर्‍यो । होचोपनका पनि फाइदा छन् ।
कस्ता फाइदा ?
विश्वका महान फुटबलर लियोनल मेसी होचै छन् । होचो कदकाले छिटोछरितो टर्न, मुभ बनाउन सक्छन् । शारीरिक बनावट बदल्न मिल्दैन । बरु यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर आफूलाई तिखार्न सकिन्छ । यसका विधि सिक्नु, सिकाउनुपर्‍यो ।
समान शारीरिक बनावट भएको भारतले कसरी स्तर उकास्यो ?
इन्टरनेसनल एक्सपोजर, लगानी र घरेलु लिग फुटबल बलियो भएकाले । हाम्रोमा लिग नै भरपर्दो छैन । मेरो १५ वर्षे करिअरमा फुटबल संघको आन्तरिक विवादका कारण ७ वर्ष लिग नखेली खेर गयो । म त प्यासनले मात्र अल्झेको हुँ ।
नेपाली फुटबल स्तर नउकासिँदा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् ?
दु:ख लाग्छ । हामी भारतीय फुटबलर निर्मल क्षत्री, सञ्जु प्रधान, विकास जैरु, रवीन गुरुङसँगै खेल्न थालेका हौँ । सम्झिन्छु, उनीहरु कहाँ पुगिसके, हामी जहाँको तहीँ । भारतमा सिंगो मुलुक फुटबलको पछाडि लागेको छ । हाम्रोमा कसैलाई वास्ता छैन । वास्ता गर्नेहरुका आफ्नै स्वार्थ छन् ।